Star Wars: Force na -akpọte ihe nkiri na Premiere na SXSW - Pop Cult
Ntu Oyi Na Icing
Akwụkwọ ndekọ banyere ime Star Wars: Akpọlitere Ike ga -ebido na SXSW
Na mgbakwunye na ogbugbu ndị ọzọ SXSW mara mma nke ukwuu, ndị bịara nke afọ a Austin art-a-thon ga-eleba anya na mbido ihe ngosi ogologo nwere atụmatụ maka imepụta ya. J.J. Abram ' Agha Star: Ike na -akpọte . Akwụkwọ akụkọ, nke isiokwu ya bụ Ihe nzuzo nke Force na -akpọte: Njem Cinematic , na-amalite na Machị 14 n'akụkụ nnọkọ na-atụ anya-na-YouTube na nnọkọ & nnọkọ. Ọdịiche na -akwado nke ahụ Ike na -akpọte onye nlekọta mmetụta anya Roger nwoke , onye na-emeputa ihe Michelle Rejwan , na ilekọta onye nchịkọta ụda Matthew Osisi a na -atụ anya ime ngosi na docs Texas na -ekpughere.
Maka onye ọ bụla na -enwechaghị ike isonye na mmemme SXSW ma emechaa n'ọnwa a, Ihe nzuzo nke ike na -akpọte ga-eme mmemme izizi ya site na Disney Movies Anywhere na dijitalụ HD na Eprel 1, sochiri obere oge ka etinye ya na Ike na -akpọte Mkpokọta ngwakọta Blu-ray na Eprel 5. Ihe nzuzo atọrọ ka ịgụnye ajụjụ ọnụ 'naanị' Ike kpakpando na ndị ọrụ ụgbọ mmiri, Ọdịiche akụkọ. Maka ntakịrị uto nke ihe doc a n'azụ ihe nkiri nwere ike ịdị, gagharịa obere ihe ngosi a sitere na Comic-Con nke afọ gara aga:
N'ezie, dịka onye ọ bụla nwere ohere ịga ebe ihe nkiri nwere ike ịgba akaebe, isiokwu nke akwụkwọ akụkọ a bara uru karịa ihe nkiri sinima nke ime ihe nkiri ogologo. Na mgbakwunye na -akara ịlọ ụwa nke George Lucas 'franchise akara ngosi na aka ọhụrụ nke Disney, Ike na -eteta mebiri ọnụ ọgụgụ ihe ndekọ ọfịs iji gosi ọzọ - na -atụghị onye ọ bụla n'anya - na Agha Star bụ akụkọ na -adịghị agwụ agwụ n'ezie.
michael b jordan the wire death
kedu ihe mere kim na kris ji daa
esi egwuri almọnd maka macaron